Iran oo u riyaaqday dhammaadka cunoqabatayntii hubka ee saarrayd – NewsHub.me
Xigashada Sawirka, EPA Qoraalka sawirka, Madaxweynaha Iran oo kormeeraya wershadaha nukliyeerka Iran ayaa soo dhawaysay dhamaadka mudadii cunoqabataynta hubka ee Qaramada Midoobay saartay oo maanta ku ekayd. Waxay se sidoo kale ku nuuxnuuxsatay in aanay haatan qorshaha ugu jirin in ay ku talax tagto soo iibsiga hubka.
Warbixintaas ayaa intaa ku dartay in “qorshaha gaashaan dhigga Iran ay saldhig u yihiin kartida shacabkeeda iyo awoodda dalku. Hase yeeshee dhanka hubka halista ee nukliyeerka ah iyo in kharash badan kaga baxo hubka caadiga ah bachelor’s degree aanay diyaar u ahayn oo aanay meelna kaga jirin istiraatijiyadda difaaca Iran.”
Lix dawladood oo waaweyn (Maraykanka, Ruushka, Shiinaha, Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka) ayaa heshiis la galay Iran kaas oo dalkaas ka xayiraya inuu horu mariyo hubkiisa nukliyeerka ah, Iran na bathroom ogolaado in cunoqabataynaha saaran laga khafiifiyo.
AFP Qoraalka sawirka, Mike Pompeo, wasiirka arimaha dibadda Maraykanka “Talaabo ayaan ka qaadaynaa dawlad kasta oo haatan isku dayda in ay Iran cunoqabatayntii ka debciso, cunoqabatayn ayuu Maraykanku saari doonaa dal kasta oo arintaa ku dhaqaaqa.” Ayuu yidhi.
Iran waxay yeelatay karti iyo farsamo weyn oo ay hub ku samaysan karto intii ay saarnayd cunoqabatayntii Qaramada Midoobay ee loogu diiday in ay center soo iibsato.
Xigashada Sawirka, Reuters Qoraalka sawirka,
Sannadkii 2013 ayaa Iran waxay heshiis kala saxeexdeen reer Galbeedka, kaas oo ku saabsanaa barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalaheeda bachelor’s degree.
Heshiiskaas ayay Iran ku balanqaaday inay dhinto kaydkeeda tayeenta macdanta uraniyamka, oo bathroom isticmaali karo hubka nukliyeerka. Iran ayaa cuna qabataynta qaar laga qaadayaa hadii ay fuliso heshiiska.
Previous post:Wedding receptions and social events to resume at Dubai hotels and halls
Next post:Xi Rallies China Behind Shenzhen as Tech Battle Heats Up